Caalamka oo weli hadal haya in Boko Xaraam Soomaaliya lagu tababaro! | shumis.net
Home » Layaab » Caalamka oo weli hadal haya in Boko Xaraam Soomaaliya lagu tababaro!
Caalamka oo weli hadal haya in Boko Xaraam Soomaaliya lagu tababaro!
Saxaafadda dalalka Galbeedka Afrika iyo weliba kuwo caalamka ah ayaa weli si weynu hadal haya hadal dhawaan ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, kaas oo ahaa in Boko Xaraam lagu soo tababarey dalka Soomaaliya, taas oo su’aalo badan la iska weydiiyey.
Xassan Shiikh Boko Xaram
Bishii Feberaayo ee aanu soo dhaafnay horaanteedii ayuu ahaa markuu Madaxweynaha Soomaaliya ka qeyb galay Shirkii Caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Germany oo looga hadlayey la dagaalanka Argagaxisada Caalamiga ah, shirkaasi ayey madax badan ka qeyb galeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud oo hogaaminayey wafdiga ka socda dowlada Soomaaliya ayaa khudbad kasoo jeediyey mid kamid ah kulamadii ka dhacay shirweynahaasi gaar ahaan kulankii looga hadlayey la dagaalanka amni xumada iyo saboolnimada ee Qaarada Afrika, wuxuuna kamid ahaa Mas’uuliyiinta lagu sharfay inay khudbad kooban [Keynote Speaker] kasoo jeediyaan madasha kahor dood halkaasi ka dhacday.
Kulankaasi ayaa Madaxweynaha Soomaaliya lagu casumay inuu khudbad kooban kasoo jeediyo furitaanka kulankii Afrika u gaarka ahaa, balse kama mid ahayn xubnihii madasha ku doodayey oo kamid ahaa Wasiirka Arrimaha Dibada ee Itoobiya iyo Madax kale doodaasi oo uu daadihinayey Madaxweynihii hore ee Nigeria Abosanjo.
Hadaba Maqaalkan waxaan ku eegaynaa hadalkii Yaabka badnaa ee uu Madaxweynaha Soomaaliya kasoo jeediyey Shirkaasi isagoo sheegay in Kooxda Boko Xaram lagu soo tababaro dalka Soomaaliya oo ay gacan ka helaan Al Shabaab, sida uu sheegay Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud. Waxaase yaableh in Madaxweynaha isla khudbadiisa ku sheegay in Al Shabaab iyo Daacish dagaal ka dhaxeeyo, Boko Xaram waxay kamid tahay isla shabakada Daacish!
Kooxda Boko Xaram ayaa sanadkii hore 2015 loo doortay kooxda xasuuqyada ugu badan ka geystay caalamka, xitaa ka hormartay faracyada Daacish/ISIS ee Siiriya iyo Ciraaq.
Arrintan ayaa waxaa weli si weyn u hadal haya Saxaafada Caalamka, waxayna u muuqataa mid diiwaanka madow u geli doonta dalka Soomaaliya oo horey loogu tilmaami jiray Fowdo, argagaxiso, Burcad Badeed, saboolnimo iyo macaluul. Hadana waa Boko Xaram.
Illaa iyo hada ma jirto dowlad kale oo Afrikaan ah oo sheegatay in Boko Xaram dalkooda lagu tababaro, waxaana kamid ah dowladaha jaarka la ah Nigeria sida Chad iyo Cameroon oo ay kooxdaasi ka hawlgasho.
Waxaana sidoo kale arrintan la yaabay Madaxdii Sirdoonka reer Galbeedka oo laftooda fadhiyey shirweynihii Munich, meesha xogtan uu ka keenay Madaxweynaha Soomaaliya maaha mid uu shaaciyey ama tusaale usoo qaatay. Walow loo badinayo in arrintan ay la xariirto dhaqaale ay dowlada Soomaaliya dooneyso inay ka hesho dalalka horumaray oo hada si weyn diirada u saaray la dagaalanka Boko Xaraam iyo Daacish.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaale xumada ka jirta Soomaliya ay keento in dad badan ku biireen kooxda Al Shabaab, walow ka qeyb galayaashii shirka ay dhankooda sheegeen arimaha xagjirnimada keenta inay kaalinta 1aad uga jirto Kali-talisnimada iyo xukun jaceelka Madaxda Afrikaanka.
Somaliya Magac raac, Balse Wax kumahelin!
Shirka Munich maaheyn goob lagu qeybsanyey wax dhaqaale ah balse wadan walba wuxuu u taagnaa inuu sumcadiisa illaalshado isla markaana soo bandhigo fikradaha uu hayo ee looga hortagi karo kooxaha Argagaxisada. Waa marka laga reebo Soomaaliya oo iyadu dusha u ridatay danbi horleh iyo in dalkeeda lagu tababaro kooxdii loo aqoonsaday inay ugu cawaansantahay Caalamka, isla markaana aan shirka keenin wax fikrad cusub ah oo wax looga qaban karo argagaxisada. Waa markii u horeysey ee Soomaaliya lagu eedeeyo in xitaa Boko Xaraam lagu soo tababaray, eedeyntaas oo aan looga horeyn Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Isdifaacidii Sacuudiga iyo Aftahanimadii Al-Jubeir
Sacuudiga MunichDalalka kale ee shirka Munich ka qeyb galay ayaa iyagu soo dirsaday rag codkar ah oo qaarkood indho sarcaad ku riday madaxdii meesha fadhiday sida Wasiirka Arrimaha Dibada ee Sacuudiga Adel Al-Jubeir oo isagu u yimid madasha siduu u difaaci lahaa Siyaasada iyo Dhaqanka dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Daacish iyo Haweenka
Wasiirka Sacuudiga ayaa si adag isaga difaacay eedaynta ah in Dalkiisa uu ku lug leeyahay kooxda Daacish, wuxuuna eeda dusha u saaray Madaxweynaha Siiriya Bashaar Al Assad oo uu sheegay inuu yahay ninka abuuray ama kaalinta kuleh awooda Daacish.
Adel Al-Jubeir ayaa weerar afka ah ku qaaday dalalka reer Galbeedka ee meesha madaxdoodu fadhiday, isagoo sheegay in Sacuudiga uu yahay dal horumaray oo meelo badan guul ka gaaray, balse Saxaafada Reer Galbeedka ay caado ka dhigteen inay mar walba sheegaan in wadanka Sacuudiga Haweenka lagu cunsuriyeeyo. Wasiirka ayaa sheegay in dalkiisa sanad walba ay kasoo baxaan kumanaan Jaamiciyiin haween ah.
“…Arrinta Mar walba lagu soo cel celiyo ee ah Haweenka Sacuudiga looma ogola inay gawaarida wadaan, waa mid aan la xariirin Diinta balse waa mid la xariirta Dhaqankeena, anagaana taasi xalin doono, ee dulqaad yeesha….” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibada Adel Al-Jubeir oo kala hormaray martidii reer Galbeedka qodobadii ay islahaayeen weydiiya, isagoo meesha ka saaray eedaynmaha loo soo jeediyo dalka Sacuudiga.
Al-Jubeir ayaa sidoo kale sheegay inay gacan siinayaan xulafadooda Sunnida ah sida Masar, Ciraaq, Sudaan iyo Yemen. Walow uusan soo hadal qaadin dalka Soomaaliya oo isagu xiriirka u jaray IRAN kadib codsigii Sacuudiga.
Daacish & KKK
Daacish-isisMid kamid ah Wafdigii UK oo Wasiirka Su’aal weydiiyey ayaa ku dooday inaan la inkiri karin sida ay kooxdaasi ISIS ay sheeganeyso ay ku taagan tahay Sharciga Islaamiga ah, wuxuuna Wasiirka si cajiib ah ugu jawaabay in Daacish lamid tahay kooxda Xagjirka Kirishtaanka Maraykanka ee KKK kuwaasi oo iyaguna sheegta inay yihiin Kirishtaanka dhabta ah isla markaana dil iyo xasuuq u geysan jiray dadka Madowga Maraykanka, marka hadii Daacish lagu sheego Islaamka Rasmiga ah dhinaca kale KKK baa iyaguna noqonaya Kirishtaanka Rasmiga ah ayuu yiri Wasiirka oo si degan khudbadiisa u soo jeediyey.
Sacuudiga wuxuu ku guuleystay si xirfadeysan inuu isaga fogeeyo labadii arrin ee Reer Galbeedka ku dhaliili jireen ee ahayd in Daacish ay iyagu aasaaseen iyo in haweenka Sacuudiga la dhibaateeyo.
Hadaba maxaa ku khasbay Soomaaliya inay dusha u ridato eed horleh iyo koox aan shuqul kulahayn dalka Soomaaliya ee Boko Xaram?
Marka laga yimaado Dhaqaale doonka astaanta u noqday hogaamiyayaasha Soomaaliya, Maxaa u diiday Madaxweynaha Soomaaliyeed inuu mar-mar xasuusto difaacida sumcada dalka Soomaaliya?
Caalamka see buu u arkayaa hadalada is khilaafsan ee Madaxweynaheena.
1- Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegtay in wadankiisa yahay Fowdo argagaxisada lagu tababaro,
2- Dhinaca kale wuxuu ku doodayaa dalka Soomaaliya inuu hada nabad yahay isla markaana dalalka Yurub ay soo celin karaan Qaxootiga ay diidaan inay sharciga siiyaan, iyadoo dowlada Federaalka ku bedalan doonto dhaqaale lagu kabo sida la sheegay miisaaniyada dowlada.
3- Docda kalena Caalamkana wuxuu ugu baaqayaa inay maalgashtaan Soomaaliya xili caasimadii amnigeeda dowlada ku fashilantay!
Hoos ka daawo Muuqaaladii Munich ee Taariikhda galay iyo Qaabkii ay weli u hadal hayaan Saxaafada Caalamka!
Title: Caalamka oo weli hadal haya in Boko Xaraam Soomaaliya lagu tababaro!
Posted by galmada Net, Published at March 05, 2016 and have 0 comments